बलात्कार रोक्न बालबालिकालाई शिक्षित बनाउनुपर्छः भावना राउत | Kendrabindu Nepal Online News
12862301 568039 4798708 7495554
16719 38 8239 8442
बलात्कार रोक्न बालबालिकालाई शिक्षित बनाउनुपर्छः भावना राउत
८ आश्विन २०७६, बुधबार १२:२६
काठमाडौं । हाम्रो समाजमा बलात्कार, एसिड आक्रमण, यौन दुव्यर्वहारजस्ता घटना दिनप्रति बढ्दो क्रममा छ । यस्ता घटनामा सिकार हुनेमा बालिकाहरू बढी छन् । यसले नेपाल बालिकाहरूका लागि असुरक्षित बन्दै त छैन भन्ने अहं प्रश्न उठान गरेको छ भने यस्ता घटनाका बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । यो त भयो बलात्कारजन्य घटनापछि चालिने कदमहरू । घटना हुनुभन्दा पहिला नै जनचेतना फैलाउनु पनि महत्वपूर्ण काम हो । जुन न्यून मात्रामा भएको छ ।
धेरैको जोड अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् भन्नेतिर गएको पाइन्छ । तर, घटना नै हुन नदिने वातावरण बनाउनतर्फ भने कमैको मात्र ध्यान गएको देखिन्छ । बलात्कार, एसिड आक्रमण तथा यौन दुव्यर्वहार हुनुपुर्व नै जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले सक्रिय संस्था हो ‘निर्मलाहरू बचाऊ’ अभियान । यो अभियानले घटनापछि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दैन । यसले घटना हुनै नदिन जनचेतना फैलाउने काम गर्छ । यस अभियानका अभियन्ता हुन्, अभिनेत्री ऋचा शर्मा र अभियानकर्मी भावना राउत ।
अभियानअन्तर्गत बाल यौन दुराचार र यौनहिंसा भनेको के हो भन्ने विषयमा बालबालिकाहरूसम्म पुगेर चेतना फैलाइन्छ । यो अभियान के हो ? यसबाट के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् ? र किन यो अभियानको आवश्यकता पर्‍यो ? भन्नेजस्ता विषयमा अभियानकर्मी भावना राउतसँग केन्द्रबिन्दुकर्मी कृष्णसिंह धामीले कुराकानी गरेका छन्:
‘निर्मलाहरू बचाऊ’ अभियान के हो ?
हामीले जहिले पनि रेप भएपछि नाराबाजी गर्ने, अपराधीलाई कारवाही गर भन्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने गरेका छौं । तर रेप नै हुन नदिन केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच आयो । रेप मात्र हाम्रो विषय होइन, यसमा यौन हिंसा, बालिकामाथि हुने गरेका यौनहिंसा लगायतका विषय हुन्छन् । मैले व्यक्तिगत रूपमा यो अभियान सुरुवात गर्नुको पछाडि एउटा गतिलो कारण छ ।
हाम्रै गाउँकी एक बहिनी सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन् । बलात्कार गर्नेहरूमध्ये एकजना भाइ सानै थियो । त्यो पनि मेरै गाउँको । त्यो भाइलाई सुधार केन्द्रमा राखिएको थियो । भेट्न जाँदा ऊ मलाई मज्जाले हग गरेर रोयो । उसले ‘यस्तो गर्‍यो भने कानुनी कारवाही हुन्छ भन्ने मलाई थाहा नै थिएन दिदी’ भन्यो । २० वर्ष पूरा गरेका अन्य तीन जनाको लहैलहैमा लागेर ऊ घटनामा सामेल भएको रहेछ ।
त्यो बेला मलाई के लाग्यो भने हाम्रो एजुकेशन सिस्टम, समाज र स्वयं मेरो पनि हात छ जस्तो लाग्यो । यस्तो गर्नुहुन्न, यो क्राइम हो भनेर सिकाइएको पनि छैन । यो सही हो, यो गलत हो भनेर सिकाइएको छैन भन्ने फिल भयो । यस्ता घटनामा ससाना बालबच्चाहरू पर्न थालेपछि मेरो मनमा अबचाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने भयो र यो अभियानको थालनी गर्‍यौं ।
यो अभियानका लागि तपाईंहरूले स्कूल मात्र किन रोज्नुभयो ?
यौन हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य अपराधमा कारवाहीभन्दा पहिला जनचेतना फैलाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य भने कतैबाट पनि भएको पाइँदैन । अब यो जनचेतना कहाँ र कसरी फैलाउने भन्दा हामीले सबैभन्दा पहिला ससाना बालबालिकाबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने भयो । र त्यसका लागि स्कूल नै उपयुक्त थलो हुन्छ भन्ने ठहर भयो । त्यही बीचमा नायिका ऋचा शर्मासँग भेट भयो । उहाँले पनि ल हुन्छ गरौं न त भन्नुभयो । अनि हामीले सहकार्य गर्‍यौँ ।
यो अभियानमा के के हुन्छ र के के सिकाइन्छ ?
हाम्रो एजुकेशन सिस्टम नै फेर्नुपर्ने हुन्छ । किताबमा भएको सामान्य कुरा पनि पढाउन नमान्ने र यो त तिमीहरूले आफैं घरमा पढ्नु भन्ने शिक्षकका कारण पनि समस्या छ । अनि विद्यार्थीहरूलाई गुड टच, ब्याड टचका बारेमा पनि जानकारी दिइँदैन ।
मलाई कसैले सानोमा गलत तरिकाले छोएको थियो भने त्यो ठूलो र बुझ्ने भएपछि मात्र रियलाइज गरिन्छ । सानोमा त्यो ब्याड टच हो भनेर कसैले भनिदिएकै थिएन । मैले पनि यो कुरा ठूलो भएपछि मात्र थाहा पाएँ ।
यो अभियानमा घटनापूर्वको मात्र कुराहरू सिकाइन्छ कि घटनापछि कारवाहीको लागि पनि आवाज उठाइन्छ ?
सबैभन्दा पहिला घटनापूर्व नै समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । घटना नै भएन भने केको आवाज उठाउने ? त्यसैले हामी घटनापछि कारवाहीको आवाज उठाउनुभन्दा पहिला घटना नै हुन नदिनेतर्फ केन्द्रित भएका हौँ । घटनापछि कारवाही हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन त थुप्रै संघ–संस्थाहरू क्रियाशली छन् ।
घटनापूर्वको चरणमा नै अर्थात् रेप, यौनहिंसाजस्ता गलत कुरा हुनै नदिन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ । यसमा हामीले सडक नाटकहरू गर्ने, घटनाका बारेमा जानकारी गराउने, यस्तो कार्य गरेमा के हुन्छ ? भनेर जानकारी दिनेजस्ता चेतनामूलक कार्यक्रम गर्छौं ।
स्कूलमा गएर के–के गर्नुहुन्छ ?
स्कूलका बालबालिकालाई सचेतनाका लागि पाठ्यक्रम नै विकास गरेका छौं । जसमा १ देखि ३ कक्षासम्मका बच्चाहरूलाई सामान्य जानकारी दिन्छौं । धेरै सेक्सुअल कुराहरू गर्दा उनीहरूमा समस्या पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै त्यस्तै खालको पाठ्यक्रमको विकास गरिएको छ । उनीहरूलाई गुड टच भनेको के हो ? ब्याड टच भनेको के हो ? कसैले यस्तो गरेमा के गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाइन्छ । कसैले ब्याड टच ग¥यो भने ‘नो’ भनेर भाग्नुपर्छ भनेर सिकाइन्छ ।
४ देखि ६ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई बाल यौन दुव्र्यवहार भनेको के हो ? यौन दुव्यर्वहार भनेको के हो ? भन्ने सिकाइन्छ । अनि केटाहरूलाई किन यस्तो गर्नुहुँदैन ? भन्नेबारे नैतिक शिक्षा पनि दिने गरेका छौं । ८ कक्षादेखि १० कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई यसका साथै संविधान नै पढाइरहेका छौं । तिम्रो मौलिक अधिकार यो हो, योभन्दा बाहिर गएमा यस्तो कारवाही हुनसक्छ, तिमिले पाउनुपर्ने अधिकारी यो हो, तिम्रो कर्तव्य यो हो भन्ने कुरा सिकाउँछौँ ।
विद्यार्थीहरूलाई कानुन सिकाउँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
पहिला संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो भनेर मात्र सिकाइन्थ्यो । अहिले उनीहरूलाई फन्डामेन्टल राइट सिकाउँदा रिस्पोन्सबिलिटी बढेको छ । आफ्नो हक प्रयोग गर्दा अरूको हक हनन गर्नुहुदैन भन्ने जानकारी दिँदा केही परिवर्तन त भइरहेको छ । अहिलेको शिक्षा स्लो पोइजनजस्तो लाग्छ । महिलाहरूका लागि यो शिक्षाले शिक्षा दिन सक्दैन ।
हाम्रो अभियानले पूरै परिवर्तन नभए पनि उनीहरू खुल्न थालेका छन् । आफूलाई के समस्या भइरहेको छ ? त्यसको कसरी प्रतिवाद गर्ने ? जस्ता विषयमा केही सतर्क भएका त छन् तर एकैचोटि सबै कुरा पूरा हुँदैन ।
एकजना सानी बच्चीले आफूले भोगेको समस्या खुलेरै भनिन् । ‘एउटा दाइ छ उहाँले नराम्रो तरिकाले मलाई छुनुहुन्छ ।’ भनेर उनी बोल्नसक्ने भएकी छन् । जुन हाम्रो लागि ठूलो कुरा हो ।
एजुकेशन सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यसको कुन पार्ट चेन्ज गर्ने भन्नुभएको हो र ?
विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा यससम्बन्धी शिक्षा दिने कुनै पनि विषय नै समावेश छैन । हाम्रो माग नैतिक शिक्षामा यस्ता विषयहरू समेटिनुपर्छ भन्ने हो । गुड टच, ब्याड टचका बारेमा सिकाउनु, पाठ्यक्रममा राखिनु ठूलो कुरा होइन । शिक्षा नीतिमा यस्तो कुरा समावेश गर्नु सामान्य हो । तर राज्यले यसलाई किन गर्न सकिरहेको छैन ?
आज नो भन्न नसक्ने बच्चाले भोलि गएर भोग्नुपर्ने घरेलु हिंसालाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । सरकारी स्कूलहरूमा पढाउनुपर्ने कुराहरू पनि पढाइँदैन । स्वास्थ्य सम्बन्धीका चित्रहरू समेत नपढाएर ‘ल कितावमा छ, त्यो घरमा गएर हेर है’ भन्ने परिपाटी छ । जबसम्म यस्ता कुरा बुझाएर, हिंसाको स्वरूप बुझाएर त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर सिकाइँदेन तबसम्म यसको समाधान हुँदैन ।
रेपको सन्दर्भमा धेरै केसमा सुरुमा के छ भनेर जिस्काउँदै सुरु हुन्छ । त्यहाँ नै स्टप गर्न सक्यो वा नो भन्न सक्यो भने धेरै निर्मलाहरू बच्न सक्छन् ।
एस र नो भन्दा नै बलात्कारजस्ता घटना रोकिन सक्छन र ?
सबै त रोकिन सक्दैन । हामीले केटीहरूको क्षेत्रबाट मात्र काम गरिरहेका छैनौं । केटाहरूलाई पनि विभिन्न तरिकाले जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेका छौं । केटाहरूमा एक खालको इगो हुन्छ । किशोर उमेरका केटाहरू आफूलाई संसारकै सर्वश्रेष्ठ ठान्छन् । त्यो उमेरको प्रभाव हो । उनीहरूको त्यो मेन्टालिटी नै चेन्ज गर्न हामी काम गर्छौं ।
बलात्कारी मनसाय छ भने त्यो कहिल्यै पनि चेन्ज गर्न सकिदैन तर इगोलाई भने कम गर्न सकिन्छ । कसैले नो भनेमा त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने केटाहरूलाई सिकाइन्छ ।
जस्तैः मुस्कान खातुनको केसमा एसिड प्रहार गर्ने केटालाई त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने सिकाइएको भए त्यो घटना नहुन पनि सक्थ्यो । त्यो केटालाई एसिड प्रहार गर्दा मुस्कानको जीवनमा कस्तो होला भन्ने चेतनाको विकास गराउन सकिएको भए केही फरक त अवश्य पथ्र्यो । यस्ता घटनालाई पूरै नियन्त्रण त गर्न सकिँदैन तर ४० प्रतिशत मात्रै पनि कम गर्न सकियो भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो ।
यस विषयमा केही अनुभव छन् ?
पक्कै । एकदिन म पोखराको लेकसाइडमा थिएँ । दुई तीनजना केटी साथीहरू थियौं । एकजना आएर जिस्काउन थाल्यो । अन्य साथीहरू त ह्या छोडिदिऊँ जेसुकै गरून् भन्न थाले । जिस्क्याउन नछाडेपछि मैले फर्किएर हेरेँ । उसले ‘जाने हो’ भन्यो अनि मैले ‘अँ, जाने हो पुलिसकोमा जान्छस् भन्दा ऊ बाइक कुदाएर गयो ।’ त्यो दिन हामी चुप लागेर बसेका थियौं भने केही ठूलो घटना घट्न सक्थ्यो । केटीहरूको जुन मौनता छ नि त्यो ठूलो कमजोरी हो ।
यस्ता घटनामा सामाजिक संरचना कत्तिको जिम्मेवार हुन्छ ?
धेरै बलात्कारका घटना बाहिर आउँदैनन् । कति धेरै केसहरू गुम्सिएर पनि बसेका हुन्छन् । सामाजिक संरचनाले महिलालाई त्यस्तै बनाइदिएको छ । तिमीले यो समाजमा बस्दा धेरै कुरा गर्नुहुन्न । कुनै पुरुषसँग खुलेर कुरा गर्नुहुन्न भन्ने सिकाइन्छ । ओपन भएर कुरा गर्न घरबाटै प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ । जसले गर्दा पनि महिलाहरू पीडित बनिरहेका हुन्छन् ।
अभियानको प्रभाव कतिको परेको छ ?
हामीले गरिरहेको कामको प्रतिफल देखा पर्न थालेको छ । हामीले जुन जुन ठाउँमा अभियान गरेका छौं, त्यहाँमा बालबालिकाहरू केही मात्रामा सतर्क देखिएका छन् । हामीले एकजना सानी नानीलाई नो भन्न सिकाएका थियौं । त्यसपछि उनले जुन कुरामा पनि नो भन्दिने रहिछन् । उनको बुबाले हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँ कमसेकम मेरी छोरीले नो भन्न त सिकेकी छ भन्दै खुशी हुनुभएको थियो । यसरी नो भन्न, प्रतिवाद गर्न मात्र सिक्दा पनि ठूलो घटना हुनबाट जोगिन सकिन्छ ।
तथ्यांक हेर्दा यस्ता घटना सबैभन्दा बढी हुने क्षेत्र प्रदेश २ हो । ‘निर्मलाहरू बचाऊ’ अभियान प्रदेश ३ मा ?
प्रदेश ३ मा सयजना व्यक्तिले कुनै विल लिएर जान्छन् भने सदनमा त्यसको सम्बोधन हुन्छ । शिक्षा नीति त प्रदेशले चाहेको खण्डमा उसले पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । एउटा प्रदेशमा नमुना स्कूलहरू स्थापना गर्न सक्यौं भने अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गराउन सहज हुन्छ । ती नमुना स्कूलहरूका आधारमा सरकारलाई अन्य क्षेत्रमा लागू गराउन आग्रह गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश सरकारलाई यसबारे आग्रह गर्न सहज हुन्छ । तर प्रदेश २ मा यो कुरा सजिलो छैन । सबैभन्दा बढी आवश्यकता भनेकै प्रदेश २ लाई हो तर त्यहाँ तत्काल सम्भव हुँदैन । प्रदेश ३ मा मात्र पनि यो कुरा स्थापित गराउन सकियो भने अन्य प्रदेशले पनि सिक्न सक्छन् ।
अभियानका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
अहिलेसम्म हामीलाई कार्यक्रम गर्न डिआईसीसीले सहयोग गर्दै आएको छ । १० दिनको वर्कसपको लागी डिआईसीसीले निःशुल्क तालिम दिएको थियो । त्यही तालिमको आधारमा स्वयंसेवीहरूले काम गर्दै आउनुभएको छ । स्थानीय तहले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । साथीभाइहरूबाट पनि सहयोग भइरहेको छ ।
राष्ट्रप्रमुख महिला हुनुहुन्छ । राज्यका निर्णायक तहमा पनि महिलाहरू पुगेका छन् । तर पनि महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आएको छैन त ?
राज्यका निर्णायक तहमा पुगेका महिलाहरूले काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । राष्ट्रपति महिला त हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म महिलाका लागि कुन–कुन ठाउँमा बोल्नुभयो ? प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अर्को कुरा, महिलाको लडाइँ महिलाले मात्रै लड्नु पर्छ भन्ने होइन । बलात्कारपछि छोरीको हत्या हुन्छ भने त्यसको पीडा आमालाई मात्र पक्कै हुँदैन, बुबालाई पनि त हुन्छ ।
त्यही भएर महिलाको हकअधिकारका बारेमा महिलाले मात्र बोल्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु एकदम गलत हो । हाम्रो अभियानमा थुप्रै पुरुष साथीहरूको सहयोग छ । हामीले काम गरिरहेको क्षेत्रमा पनि महिलाभन्दा पुरुषको बढी सहयोग छ । महिलाहरू घरको काममा बढी व्यस्त हुने भएकाले पुरुषले बढी सहयोग गरेका छन् । महिला उत्पीडनका कुराहरूमा महिलाले मात्र बोल्नुपर्छ भन्ने छैन ।
कृष्णसिंह धामी केन्द्रबिन्दुका डेस्क संयोजक हुन् । उनी समसामयिक घटना तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् । उनी विगत ७ वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
Bhawana Raut, rape, निर्मलाहरू बचाऊ, बलात्कार, महिला
Prevदशैँ मनाउन घर फर्किनेको लर्को
प्लाष्टिकको चामल र अण्डा हल्ला मात्रै- विभागNext
१५ बर्षिया बालिका बलात्कृत, ६ महिनाको गर्भ
जनकपुरमा रूपैयाँ छर्ने महिलाहरुको स्वाब नतिजा ‘नेगेटिभ’
पाल्पामा एक महिलामाथि जबर्जस्ती करणीको प्रयास
महिलाले पुरुषलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न के गर्ने ?
६ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ७६ वर्षीय बृद्ध पक्राउ
विश्वभरी सवा करोड मानिस कोरोना सङ्क्रमित, कहाँ कति ?
मृत भनी दाहसंस्कार गरिएका व्यक्ति जीवित फेला !
मनसुन सक्रिय हुनेक्रम जारी, अझै केही दिन भारी वर्षाको सम्भावना
मौद्रिक नीति तर्जुमा : चुनौतीका चाङ्गमाथि नयाँ गभर्नर
अवैध युरिया बरामद
आईएमएस ग्रुपद्वारा केएन–९५ मास्क उत्पादन सुरु
नेपालका लागि राजदूत बनेका दुई चिनियाँ चेली, ‘जुलिया चाङ’ को बाटोमा ‘होउ यान्छी’ (भिडियो रिपोर्ट)
सङ्खुवासभा पहिरोमा चार जनाको जीवितै उद्धार, हराएकाको पहिचान
लामो समयपछि दुई अध्यक्षको एउटै स्वर : के नेकपा विवाद साम्य भएकै हो ?